कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रूपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिएका छन् । पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उनी पुनः विजयी भएकाे महानगरवासी बताउँछन् । विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रूपमा काम गरेका उनले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गरे ।
प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएपछि अबका पाँच वर्षका यहाँका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू केके हुन ?
महानगर कला नगरी हो र यहाँ प्रशस्त सम्पदाहरू छन् । मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक सम्पदामा सुधार भइरहेको छ । भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भीमसेन मन्दिर सरकारसँग कति पनि पैसा नलिई पुनःनिर्माण गरिएको छ । सरकारसँग पैसा लिँदा ठेक्कामा काम गर्नुपर्छ र ठेक्कामा गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भएकाले चन्दा सङ्कलन गरेर त्यसको निर्माण गरिएको छ । सम्पदाका पाँच छवटा परियोजना जारी छन् र त्यो पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा जनतासँग गर्नुभएका सबै प्रतिबद्धता पूरा भए ?
अघिल्लो पटक घोषणापत्रमा उल्लेख भएका र नभएका काम गरेका छौँ । हामीले भीमसेन मन्दिर बनाउने पुल्चोकको समयफाल्चालगायत ७७ पाटीपौवा बनाउने योजना थिएन । पाटनमा अनुदानमा ट्र्याक लाइन बनाउने योजनामा थिएन । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई उनीको एक सयौँ जन्मदिन मनाउने कुरा होस वा कोभिड सङ्क्रमणमा नागरिकलाई सहयोग गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नभए पनि हामीले गरेका छौँ ।
मेरो सोचाइ के छ भने ललितपुर महानगरले बनाएको जस्तै साइकल लेन छिमेकी नगरपालिकाले पनि गर्दा राम्रो हुन्छ । उत्तरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महाराजगञ्जसम्म र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले शिवपुरीसम्म र दक्षिणमा गोदावरी नगरपालिकाले वनस्पति उद्यानसम्म साइकल लेन बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । गोदावरीबाट शिवपुरीसम्म ४२ किमी लम्बाइ छ । आगामी दिनमा अन्तरनगरपालिका साझा परियोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाइनेछ । वाग्मती करिडोरको उचाइ नदी जसरी बगेको छ सडक साइकल लेन उपयुक्त छ ।
महानगरमा ठूला अस्पताल छन् तर सहरी गरिबले त्यहाँ जान सक्दैनन् । उनीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्‍याउनुहुन्छ ?
अहिले हामीले काठमाडौँमा जसरी एकदुई दिन फोहर ल्याण्डफिल्ड साइट नजाँदा नै सडकमा छरपष्ट नहुने व्यवस्था मिलाएका छौँ । महानगरमा फोहर आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गछौँ । थोरै फोहर फोहर स्टेशनमा सङ्कलन गर्छौं । दुईतीन साइटमा विर्सजन गरेर माटोले पुरेर व्यवस्थापन गछौँ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुनः रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ । मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन् यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम सुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ । अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गरेको छ त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
महानगरले अब गाडी किन्दा विद्युतीय होस् भन्ने छ । मैले चढ्ने गाडी विद्युतीय हुन्छ । नगर प्रहरीलाई विद्युतीय सवारीसाधन चढ्नका लागि खरिद गरिनेछ । केन्द्रीय सरकारले साझामार्फत बस खरिद गर्न रु तीन अर्ब दिएको छ । साझाले नमूना बस ल्याएको रहेछ र थप बस पनि उसले ल्याउनेछ ।